KDE Plasma: waa maxay oo sidee ayey ugu rakibtaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
KDE Plasma: waa maxay oo sidee ayey ugu rakibtaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Waxaan xilliyo daabacnaa wararkii ugu dambeeyay ee ka Plasma KDE (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, kuwa kale), ama qaarkood theme ku dhufasho, ama a app xiiso leh loogu sheegay Deegaanka Desktop.
Qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Maxay tahay? y Sidee u rakibtaa?. Adkeynaya, dabcan, hada DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster. Kaas oo sidoo kale hada aasaas u ah qaybinta MX-Linux 19 (Duckling xun).
KDE Plasma Sida kuwa kale oo badan Deegaanka Desktop (DE) ka dhigaysa nolosha isaga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, Waa mid ka mid ah taariikh duug ah, oo muddo kadib noqotay mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan, ahaansho qurux badan, iftiin leh, dhammaystiran oo shaqeynaya.
Laga soo bilaabo hada 5 version, waxaa loo yaqaan magaca plasma. Iyo isku mid maxaa GNOME yimaado sida Degaanada Desktop default (default) badan GNU / Linux Distros.
1 Wax walba oo ku saabsan Plasma
1.2 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
1.3.1 Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Sawirka Isticmaalaha Sawirka (GUI)
1.3.2 Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Wajahadda Khadka Taliska (CLI)
1.3.3 Ku rakibidda xirmooyinka ugu yar ee lagama maarmaanka u ah si toos ah CLI
1.3.4 Waxyaabaha kale ee rasmiga ah ee 2 ee Rakibaadda iyadoo loo marayo CLI
1.3.5 Ficillo dheeri ah ama dheeri ah
Wax walba oo ku saabsan Plasma
Ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee laga soo saari karo tan Deegaanka Desktop waxaan ka xusi karnaa qodobbada soo socda:
KDE in uu 1.0 version la sii daayay taariikhda 12 ee July ee 1998 iyo hada 5 version, oo loo yaqaan KDE Plasma ayaa lagu sii daayay 15 ee July ee 2014.
Hadda waa a Deegaanka Desktop loogu talagalay in lagu bixiyo a khibrad daawasho oo cusbooneysiisay muuqaal u eg oo sahlan in loo isticmaalo isticmaale kasta iyo wixii kale Qaybinta GNU / Linux.
Laga soo bilaabo bilowgii, wuxuu diiradda saaray fududee isticmaalka isticmaale iyo domain dhammaan howlaha, astaamaha iyo barnaamijyada ka kooban, iyada oo loo marayo a muuqaal nadiif ah iyo akhris aad u fiican (bandhig), si sidan oo kale ah, si loo bixiyo waayo-aragnimo isticmaale is-dhexgal leh, casriyeeyay iyo nadiifiye.
Magacaaga (KDE) waa astaamaha loogu talagalay "Kool Deegaanka Maskaxda". Waxay ka kooban tahay gebi ahaanba saafi ah Software bilaash ah iyo ilo furan (Fdib iyo Software Open Source - FOSS).
Waa qayb ka mid ah Mashruuca KDE taas oo ku xidhan Ururka KDE. Waxayna ku saleysan tahay xirmada QT.
Waxay leedahay is-dhexgal aad u fiican oo leh X Nidaamka Nidaamka Daaqada Daaqada, oo wuxuu leeyahay taageero fiican iyo is dhexgal wayland, ilaa heer ay kuu saamaxayso inaad isticmaasho Miisaanka jajabka, ama haddii si kale loo dhigo, waxay u oggolaanaysaa hagaajinta cabbirka dhammaan walxaha desktop-ka, daaqadaha, farta qoraalka iyo darfaha hab ku habboon kormeeraha HiDPI.
Astaamaha hadda taagan waxaa ka mid ah, iyada qurux badan oo shaqeynaya Miiska iyo nidaamkeeda deegaanka ee codsiyada. In kasta oo taasi jirto, waa aad u fudud una baahan kheyraad yar inuu si habsami leh u shaqeeyo
Nooca xasiloon ee hadda Deegaanka Desktop-ka ee GNOME waa nambarka nooca 5.17.
Una rikoor adag taariikhi ah.
Mid ku filan dukumiintiyo habaysan laguna cusbooneysiiyaa khadka tooska ah.
Aad u fiican, dhameystiran iyo nidaamka deegaanka ee la cusbooneysiiyay iyo codsiyada.
Una bulshada weyn ee isticmaalayaasha iyo ka qayb galayaasha oo ay taageerto urur aqoonsan oo xoog leh.
Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) heer sare laga dhigi karo, oo aad ugu eg Windows, kana badan GNOME iyo kuwa kale ee sida fiican loo yaqaan.
Waxaa badanaa loo tixgeliyaa sida labaad ee kheyraadka badan ee cunaya Desktop Deegaanka, ka dibna GNOME.
Badanaa u baahan kaarka garaafyada o Awood garaafadeed oo wanaagsan si loo muujiyo Muuqaalka Isticmaalaha Muuqaalka ee Quruxda badan oo qurux badan (GUI).
Heerarkeeda heer sare ee habeynta iyo xulashooyinka qaabeynta badan waxay noqon karaan kuwo adag ama u nugul fashilka maamul xumo darteed.
para wax dheeri ah baro isla waxaad ka booqan kartaa xiriiriyeyaasha shabakadaha soo socda:
Websaydhka Rasmiga ah ee KDE
Qaybta Rasmiga ee KDE Plasma
Codsiyada rasmiga ah
Ogeysiis rasmi ah
Macluumaadka iyo Wararka isticmaalayaasha
Macluumaad iyo Warar loogu talagalay horumariyeyaasha
Haddii ay dhacdo in mid hadda jira uu leeyahay a Qaybinta GNU / Linux DEBIAN 10 (Buster) ama kuwa kale oo salka ku haya, sida MX-Linux 19 (Duckling xun), xulashooyinka rakibaadda ee ugu badan ayaa ah:
Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Sawirka Isticmaalaha Sawirka (GUI)
Orod a Console ama Terminal ka Deegaanka Desktop
Orod ka amar amar soo socda:
Sii wad ilaa dhamaadka Nidaamka Lagu Hagayo Tasksel (Xuliyaha Hawsha).
Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Wajahadda Khadka Taliska (CLI)
Orod a Console ama Terminal iyadoo la isticmaalayo Furayaasha Ctrl + F1 oo bilow fadhiga xididka isticmaalaha.
Xullo Deegaanka KDE Plasma Desktop iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Sii wad ilaa dhamaadka nidaamka la hago de Hawsha (Xuliyaha Hawsha).
Ku rakibidda xirmooyinka ugu yar ee lagama maarmaanka u ah si toos ah CLI
Orod a Console ama Terminal ka Deegaanka Desktop ama adeegsiga Furayaasha Ctrl + F1 oo bilaw fadhiga isticmaalaha super xidid.
Sii wad ilaa dhamaadka nidaamka waxaa hagaya Rakibidda Qalabka Apt.
Nota: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa a Desktop Environment ku saleysan KDE Plasma fudud ama dhammeystiran adigoo beddelaya xirmada kde-plasma-desktop by plasma-desktop, kde-standard o kde-full.
Waxyaabaha kale ee rasmiga ah ee 2 ee Rakibaadda iyadoo loo marayo CLI
Ficillo dheeri ah ama dheeri ah
Fuli falalka tayaynta iyo dayactirka Nidaamka Howlgalka socda ee amar amar soo socda:
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka KDE Plasma Desktop, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maareeyaha Soo Galitaanka SDDM.
Nota: Ka dib markii la tijaabiyo Deegaanka KDE Plasma Desktop rakibay, waad rakibi kartaa barnaamijyo dheeri ah oo dheeri ah iyo waxyaabo muhiim ah isku mid ah, sida, tusaale ahaan:
Wixii macluumaad dheeraad ah ee dheeraad ah booqo bogagga rasmiga ah ee DEBIAN y MX-Linux, ama Buugga Maamulaha DEBIAN khadka tooska ah ee internetka.
Xusuusnowna, kani waa kan qoraalka labaad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kan hore wuxuu ku saabsanaa GNOME midka soo socdana wuxuu ku saabsan yahay XFCE.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «KDE Plasma», hore loo yaqaanay oo kaliya sida «KDE», kale oo ka mid ah kuwa hadda loogu isticmaalo adduunka «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » KDE Plasma: waa maxay oo sidee ayey ugu rakibtaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
isku darid dijo
Waa maxay nooca plasma la rakibi lahaa?
Jawab ku jawaab
Salaan Jlendres. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Midka aad ka heli kartid keydka Distro-gaaga ayaa la rakibi lahaa.
"Nooca hadda deggan ee GNOME Desktop Environment waa nooca lambarka 5.17."
Salaan Mikelete. Faalladaadu aad ayey run u tahay. Adoo adeegsanaya xiriirka ku dhex jira maqaalka la yiraahdo: Macluumaadka iyo Wararka loogu talagalay isticmaaleyaasha waxaad ku gaari kartaa daabacaaddan ugu dambeysa su'aasha la weydiiyay: Ogeysiisyada bilaabista Plasma 5.17.5 ( https://kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php?site_locale=es ).
Waad salaaman tahay, waxaan ula jeeday in maqaalku dhigayo nooca xasilloon ee desktop-ka "GNOME", waana inuu dhigaa KDE.
Xidhiidhyadii ugu horreeyay ee maqaalka ayaa hore loo saxay shalay. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka!
Laba nugul nuglaansho fulineed oo male awaal ah ayaa la ogaadey oo saameynaya Intel
Coral, Barxadda Sirdoonka Artificial ee Google ee la midka ah RPI